Waa kuwee qaladaadka ugu badan ee A9 Search Engine Optimization?
Waxay u egtahay mid aan maskaxda ku jirin, laakiin dukaamada ganacsatada waxay raadin karaan waxa ay u baahan yihiin - keliya marka liiskaaga wax soo saarku uu ka kooban yahay dhamaan shuruudaha raadinta lagama maarmaanka ah ee la xidhiidha su'aalaha raadinta ee buuxiyay iibsadaha. Laakiin marka la eego in qaybta libaax ee farsamooyinka naqshad-celinta muhiimka ah ay u dhow yihiin isla sidaas, Amazon's Search Engine Optimization waxay leedahay hab aad uga duwan habkaas. Oo waxaa loola jeedaa in ay jiraan khaladaad badan oo soo noqnoqota oo aad u badan oo iibiya Amazon ayaa weli wali ka warqabin. Taasi waa sababta hoosta aan u socdo si aan u cadeeyo qarsoodiga ku wareegsan A9 Search Engine Optimization, oo aad ku muujisid caqabadaha ugu caansan, oo ay weheliso khaladaad soo noqnoqota oo ay sameeyeen ganacsiyo badan oo online ah oo iibiya alaabtooda ku yaalla suuqaas aadka isugu dhow. Sidaa daraadeed, soo jiido! Amazon A9 Search Engine Optimization
Mid ka mid ah Qodobada: Dib u eegista Shuruudaha
Waxyaabaha ay tahay in iibiyeyaasha aadka u badan ee Amazon aaminsan yihiin in qaybta taageerada ee liiska alaabooyinka ay ku qoran yihiin inta ka hadhay keywords bartilmaameedka ugu muhiimsan (taas oo dhab ahaantii ku fashilantay in ay meel u dhigato midka sheyga, ama qeybta sharaxaadda) waa goobaha ugu muhiimsan ee A9 Search Engine Optimization. Dhammaantoodna waa kuwo qaldan. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad ka dhigto midka ugu muhiimsan ee keydintaada keydka ah ee liiska alaabtaada, halkan waa hab sax ah oo lagu hagaajin karo boggaaga badeecada (sida hoos udhaca amarka muhimka ah):
1) Magaca Product;
2) Liiska Xuduudaha Maqalka;
3) Shuruudaha Raadinta ee Dib u Eegid;
4) Sharraxaadda Sheyga.
Isku Khilaaf Labaad: Dhigista Waxyaabaha Hal Meesha
Waxaan u jeedaa halkan in qaladaadihii ugu badnaa ee A9 Search Engine Optimization ay tahay xaalad caadi ah marka iibiyuhu dhigo qaybta libaax ee muhiimka ah bartilmaameedyada muhiimka ah - kaliya hal meel kaliya, halkii ay wax walba u kala soocaan shan xariiq. Waxay macnaheedu tahay inaan loo baahnayn in la siiyo dhammaan 250-kii xaraf ee hal beere ah, iyada oo aan loo eegin muhiimada aad siineyso.
Taasi waa sababta laysku haleynayo kaliya hal xariiq macnaheedu waxa weeye waxaad u maleyneysaa inaad yareyso 80% qaybta fursadaha muhiimka ah.
Qodobka Saddexaad: Isticmaalka Ereyada Islaamla ah
Sida laga soo xigtay Amazon, looma baahna in lagu soo koobo qayb kasta oo ka mid ah content, kaas oo horayba laga helay sifooyin kasta ee liiska alaabtaada. Waxay micnaheedu tahay in wax kasta oo la isticmaalo ee loogu talagalay ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah - maaha wax lumay meelahaan qaaliga ah. Ka dib markaad taabatid, liiska alaabtaada waxaad ku dhejin kartaa hab sax ah oo habboon oo habboon ayaa albaabka u furi doona si aad u hesho lambar ka badan ama lagu muujiyo ereyada muhiimka ah ee aad ka faa'iideysan karto. Si fudud u qeex, dhamaanba waxaad u baahan tahay halkan inaad sheegto mid kastoo muhiimka ah ee muhiimka ah oo kaliya hal mar (taasi waxay noqon doontaa mid kugu filan, hubaal ah), iyo si xor ah u guurto si aad u buuxiso qaybaha soo socda ee boggaaga wax soo saarka ee u baahan u-fududeyn inta ka hartay shuruudaha baaritaanka Source .